Ama-Bulls anqobe umdlalo wawo edlala nama-Lions ukufinyelela kowamanqamu | Scrolla Izindaba
Ama-Bulls anqobe umdlalo wawo edlala nama-Lions ukufinyelela kowamanqamu
Ama-Bulls athole umdlalo wamanqamu we-Currie Cup ngokushaya ama-Lions ngo-26 – 21 emdlalweni obunzima owandulela owamanqamu ngoMgqibelo ntambama enkundleni yezemidlalo i-Loftus Versfeld ePitoli.
Ukuzama ama-try amaningi kukaStravino Jacobs kanye ne-try evela kuJohan Grobbelaar bekwanele ukuthi ama-Bulls athole owandulela owamanqamu ekhaya lapho uWandile Simelane, uWillem Alberts noBurger Odendaal bephoqa ukuthi kuqedwe ngama-try kuma-Lions.
EzikaJake White zikhombise ukubekezela ekuhlaseleni futhi zisebenzise ukungaziphathi kahle kwama-Lions ukuhola ngo-11-0 kuyiwa ekhefini, kwathi umdlali we-flyhalf uMorne Steyn wakhahlela amaphenathi amabili kwathi uJacobs washaya i-try kuphela esiwombeni.
Isiwombe sesibili bekuyinto ebiyelwe ngokuqinile futhi ama-Lions abuye ngamandla futhi athola ama-try asheshayo ngokulandelana ukulinganisa izinto ngo-14-14. UWillem Alberts noWandisile Simelane bathole ama-try kuleli qembu laseGoli.
Ama-Bulls abuye ahola phambili ngo-21-14 nge-try kaJohan Grobbelaar. Ama-Lions ashaywa kakhulu ngemuva nje kokuzama, lapho uMarvin Orie noWillem Alberts behlaliswa phansi ngunompempe uRasta Rasivhenge ngokwephula umthetho ngokwehlukile.
Umqeqeshi wama-Lions u-Ivan Van Rooyen unqabile ukusola unompempe ngesinqumo asithathile sokukhipha amakhadi aphuzi.
Iqembu lasekhaya lisebenzise inzuzo yalo yokuthola izinombolo ukuthola i-try yesithathu kanti uStavino Jacobs uqede ukubonga ngenxa ye-chip ebekelwe isikhathi esikahle evela kuChris Smith. Kodwa-ke, amaLions akhombise isimilo nomoya wokulwa kwaze kwaba sekugcineni.
“Ngijabule ngomoya wokulwa ovela kubafana, sithole ama-try amabili futhi ekugcineni bekufanele sidlale nabafana abayi-13 ngakho ngiyaziqhenya ngempi esiyilwile,” kuqhuba uVan Rooyen.
Ama-Lions aklonyeliswe nge-try nguBurger Odendaal, kodwa i-try ibikade yehle kakhulu njengoba behle ngo-26-21.
Kowandulela owamanqamu wesibili, ama-Sharks axebula i-Western Province ngo-19-9 ukuze ifinyelele kowamanqamu. Ama-Bulls azokwamukela ama-Sharks enkundleni yezemidlalo i-Loftus Versfeld ePitoli ngoMgqibelo, ngomhla zingama-30 kuMasingana.
Ama-Bulls azobe ebheke ukunqoba i-Currie Cup okokuqala ngqa kusukela ngowezi-2009, anethemba lokuqeda isomiso seminyaka engaphezu kweyishumi.
Umthombo wezindaba i-Scrolla, ushicilelwe yi-Olduvai Pty, ebhalise nemithetho yokuziphatha nokusebenza ngendlela efanele, ngokushicilela izindaba eziyiqiniso, ezinembayo, nezinobulungiswa. Uma singahambisani nemithetho yokuziphatha ngendlela efanele, uma kungakapheli izinsuku ezingama-20 kushicilelwe lowo mbhalo, sicela uthintane noMmeli Womphakathi ku-011 4843612, nakwi-fax ethi: 011 4843619. Ungathintana Nomphathi wamacala [email protected]org.za noma ufake isikhalazo kumthombo wezindaba i-Scrolla ku: www.presscouncil.org.za